Baarlamaanka Soomaaliya oo muddo kama dambeys u qabtay inuu ku hor yimaado Wasiirka Arrimaha gudaha – idalenews.com
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa mar kale ugu baaqay inuu si deg deg ah baarlamaanka hortiisa ku yimaado Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga C/kariin Xuseen Guuleed si su’aalo looga weydiiyo arrimaha quseeya amniga.
Kulanka Baarlamaanka oo uu shir gudoominayay Gudoomiye kuxigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad ayaa Wasiirka Arrimaha gudaha oo haatan booqasho ku jooga magaalada Addis Ababa inuu Baarlamaanka ku hor-yimaado 14-ka bishan oo ku beegan maalinta Axada ee soo socota.
Xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka dalbaday Gudoonka in maalin dhan uu fursad u siiyo in Wasiirka Arrimaha gudaha wax laga weydiiyo arrimaha amniga iyo warbixino kale oo la haayo.
“Mudane Gudoomiye waxaa ka codsanaya hadii ay macquul tahay in hal maalin nala siiyo oo Wasiirka su’aalooyin ku weydiino, waxaa jira arrintii dadka xabsiyada lagala baxay, amni xumada magaalada waa soo badatay, arrimahaas oo dhan ayaa rabnaa inaan wax ka weydiino”ayuu yiri Xildhibaan Mustaf Dhuxulow.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in kulanka looga yeero qareenada u doodaya ehelada dadkii la dilay ee xabsiyada lagala baxay, dadka xabsiyada ku xiran dadkooda inay halkaan yimaadaan oo ay wasiirka wax ka weydiiyaan.
Baarlamaanka ayaa todobaad ka hor u yeeray Wasiirka Arrimaha gudaha intii uu ku maqnaa magaalada Kismaayo, xilligaas oo ay booqdeen Wafdi uu hogaaminayay Ra’iisul Wasaaraha, inkastoo aanu ka jawaabin dalabka ka yimid baarlamaanka.
Gudi uu baarlamaanka u magacaabay dhalinyaradii meydadkooda lagu arkay wadooyinka ee ku jiray Xabsiyada ayaa hada baaritaano ku haaya dhacdadaas oo noqotay fadeexad hareysay hey’adaha ammaanka dowladda, taasoo ku saabsan in dad xabsi ku jira inta lala baxay la dilo.
Kulankan loogu yeeray Wasiirka Arrimaha gudaha C/kariin Guuleed ayaa ku soo aadaya, iyadoo Gudoomiyaha baarlamaanka Prof. Jawaari dalka ka maqan yahay, iyadoo uu booqanayo magaalada Oslo ee dalka Norway, kadib markii uu casuumaad ka helay dowladda Norway.